China Air Deodorizer n'ichepụta na ụlọ ọrụ | FIZA
Chlorine dioxide na-ekpuchi 20 ...
Chlorine dioxide (ClO2) Sachet bụ ngwaahịa chlorine dioxide nnyefe maka ndị ọrụ maka iji ya dị ka deodorizer na onye na-ewepụ isi. A na-etinye ntụ ntụ ahụ kpọmkwem na sachets. Mgbe ekpughere na ikuku, sachets na-emepụta gas chlorine dioxide iji mebie ísì ọjọọ na-achọghị na isi iyi ha.
Ikuku ụgbọelu nwere ike
Gbanyụọ BACTERIA & VIRUS ELIMINATE ODO & ỌR UN Na-enweghị atụ
-Nrụpụta nke ngwaahịa a na-anwale na a mechiri emechi ohere, n'ezie mmetụta ma eleghị anya dị iche iche dabere na ohere ebe iji ya.
Ngwaahịa anyị enweghị ike igbu nje na ime ụlọ niile.
-Dabere na ọnọdụ ikuku na gburugburu ebe obibi, mmetụta nke ngwaahịa a nwere ike ịdị iche.
Were ngwaahịa a si na mpụga akpa wee dọka akara akara dị na akpa aluminom
Nọmalị 1 ọnwa
Pls jiri nlezianya gụọ ịdọ aka ná ntị tupu iji ya ma debe ya nke ọma
- Biko debe ngwaahịa a ka ụmụaka na anụ ụlọ ghara iru.
- Ngwaahịa a abụghị ihe oriri, ozugbo loro ya, na-a drinkingụ ọtụtụ mmiri ma na-agbụpụ ihe ndị dị na ya. Ọ bụrụ na ị kpọtụrụ akpụkpọ anụ ma ọ bụ anya, jiri mmiri dị ọcha sachaa. Ọ bụrụ na enwere ọnọdụ ndị ọzọ na-adịghị mma, biko kpọtụrụ onye dọkịta.
- Mgbe ị na-eji n’ime ụlọ, ọ bụrụ na isi ahụ siri ike nke ukwuu ma ọ bụ na ọ na-akpata ahụ erughị ala, biko kwụsị iji ya ozugbo wee mee ka ụlọ ahụ pụọ.
- Biko ekwela ka ngwaahịa ahụ ozugbo kpọtụrụ gị akpụkpọ.
-Mgbe ị na-emega ahụ ma hie ụra, pls anaghị eji ya.
- Ejila ngwaahịa a maka ojiji ndị ọzọ.
- Ngwaahịa a nwere ụfọdụ ịcha ọcha. Mgbe ị na-eji, biko hapụ akụkụ nwere oghere ikuku pụọ na uwe ma ọ bụ ngwaahịa akpụkpọ anụ.
- Ihe dị na ngwaahịa a (ClO₂) na-emebi ọla, biko hapụ ọla mgbe ị na-eji ya.
- edebekwala ya n'okpuru oke okpomọkụ ma ọ bụ nwuo anyanwụ.
- Mgbe ị na-eji ya n’èzí ma ọ bụ n’ebe a na-ekesa ikuku nke ọma, a gaghị enwe ike rụpụta ihe a tụrụ anya ya.
Nke gara aga: Chlorine Dioxide Ikuku Sanitizer
Osote: NBR Latex
Ihe eji eme akpa ikuku Deodorizer